Vaovao - Ity vokatra tsy misy dikany ity dia tena ilaina amin'ny volo malefaka sy salama
Ity vokatra tsy misy dikany ity dia tena ilaina amin'ny volo malefaka sy salama
Raha te-hanatsara ny fomba fanaovanay volo miaraka amin'ny harena hita any an-dakozia toy ny fork (Miala tsiny, Ariel), ny fiantsenana ny borosy volo tsara indrindra mifanaraka amin'ny karazana volonao, ny volonao, ny halavanao ary ny safidinao dia tsy dia sarotra. Ny borosy ampiasanao hanjavona ny snarls na hizara conditioner mandritra ny fandroana dia mety tsy ilay hampiasanao hipoaka ny feonao. Ary satria ny olona iray mankafy borosy fanesoana tery hanatsarana ny volony amin'ny volon'izy ireo, tsy midika izany fa olon-kafa no tsy aleony borosy boribory manatsara ny volony. Mazava ho azy, vao mainka sarotra ny raharaha rehefa jerenao ny fizarana volon-dohan'ilay mpivarotra hatsaranao ankafizinao na mitodi-doha amin'ny tranonkalan'ny marika manokana hisafidianana ireo fanangonana sy maodely isan-karazany. Misy safidy marobe momba ny borosy taovolo tsara indrindra, ary soa ihany ho anao ny nanafosafo ny vahoaka hatramin'ny 16 crème de la crème mividy mba hanomezana teti-bola, karazana volo, ary ilana fanaingoana.
Na mitady hazondamositra vaovao ianao (na roa!) Hihaona amin'ny filanao volo sy ny fitakiana ny volanao na mitady hanome modely tsara indrindra ho an'ny olon-tianao na namana ianao amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity, tazomy scrolling! Izahay dia namorona ny lisitry ny fivarotana farany indrindra momba ny volon'ny volom-borona tsara indrindra azonao vidina etsy ambany.
Na dia nilaza aza ny mpanao volo malaza Vernon François fa ny tananareo sy ny rantsanareo no fitaovana tsara indrindra amin'ny resaka fanaovana sy fanaovana vokatra amin'ny alàlan'ny tresses-nareo, ity paosin-doko telo-iray ity dia mamirapiratra ary izy no vahaolana tsara indrindra amin'ny filan'ny styling rehetra. Manana volombava nify malalaka ianao ho an'ny fikorontanana malefaka nefa mahomby, borosy nify tery ho an'ny fanalefahana sy fisarahana, ary tohazaina ho an'ny primping, fisintonana ary fanatsarana ny fombanao amin'ny habetsaky ny volonao.
Mahafinaritra indrindra ho an'ny volo antonony sy matevina, mahitsy ho an'ny volo, ity borosy roa volom-borona avy amin'ny Crown Affair ity no crème de la crème. Atao tanana any Italia izy io, ary ny fifangaroana stratezin'ny volon'ondry sy nylon dia manome ny menaka voajanahary anao mba hitazonana ny kofehin-drano sy malefaka, manentana ny hodi-dohanao hampirisika ny fikorianan'ny rà, hisorohana ny fahasimban'ny oksidia, hampitombo ny habetsahan'ny voajanahary ary hiantoka ny follicle hijanona ao ambony mamolavola.
Ibiza dia ny marika borosy tiam-pirazanana eo amin'ny mpanao volom-bolo maro. Ny marika dia manao karazana borosy saika eto ambanin'ny masoandro, ary manao ny laharam-pahamehana ny kalitaony. (Hevero ny bosoa ara-tontolo iainana, malefaka nefa marefo, avy any Mediterane ary fifangaroan'ny boar voajanahary sy volom-bolo vita amin'ny karbonina hafanana avy any Espana.) Izany no nilazana fa mitaky fitandremana manokana ny bangs amin'ny departemantan'ny fanaingoana, ary ity dia sosokevitra ambony indrindra misaotra amin'ny volom-boalobaky ny menaka sy ny sebum, izay manome hazavana voajanahary sy poloney voajanahary.